Ho fanampin'ny tsipiriany PCB mahazatra nomenay, Pandawill koa dia manolotra dingana fanampiny izay manatsara ny fahombiazan'ny tabilao misy anao mifandraika amin'ny fampiasana azy ireo, na manampy amin'ny fizotran'ny fivondronana marobe ahafahana mampihena ny asa sy manatsara fahombiazan'ny throughput.
Plating volamena sarotra voafantina: Fampiharana izay mitaky haavon'ny haavo na ny fifandraisana eo ambonin'ny sehatra amin'ny alàlan'ny fampiasana rantsantanana volamena na rohy mpampitohy.
Saron-tava azo simba: Pandawill dia manolotra ny saron-tava solder azo alefa ara-barotra tsara indrindra ampiasaina amin'ny fizotran'ny fivorian'ny hafanana marobe. Ny sosona fanoherana azo peelable dia ampiasaina hanaronana ireo faritra izay tsy tokony hasiana solosaina mandritra ny fizotran'ny onja solder. Ity sosona malefaka ity dia azo esorina mora foana aorian'izay handao ny pads, ny lavaka ary ny faritra mora solosaina amin'ny toe-javatra lavorary ho an'ny fizotran'ny fivorian'ny ambaratonga faharoa sy ny fampidirana singa / mpampifandray.
Vias jamba: Ho an'ny famokarana andiany, ny fandavahana laser no hany toekarena, fa tsy ny vahaolana azo atao amin'ny lafiny teknika ihany. rehefa prototyping, ny milina fitrandrahana CNC (mekanika) maoderina indrindra sy fitaovana vaovao manavao dia misy hamoahana lavaka atsofoka mekanika mitovy kalitao ary farafaharatsiny fahombiazan'ny vidiny mitovy.
Vola feno: Misy maromaro fenoina amin'ny alàlan'ny safidy mifanaraka amin'ny takinao. Vias dia mety nofenoina paty metaly conductive mba hitohizany, ny epoxy resin ampiasaina izay mamorona sakana mavitrika amin'ny rindranasa azo antoka intrinsika sy varahina fenoina ny PCB mba hanampiana ny fanaparitahana ny mari-pana ambanin'ireo singa mitovy dika mitovy amin'ny famokarana hafanana eo an-toerana.
Carbon Print: Ny karbaona dia ampiasaina amin'ny fifandraisana amin'ny keyboard sy LCD ary pin. Ny lacquer dia miorina amin'ny karbaona ary azo ampiharina mora amin'ny habaka noho ny habetsaky ny valaka.
Impedance voafehy: Ny impedance voafehy dia takiana amin'ny sehatry ny teknolojia microwave, fampielezana, tafika ary fifandraisana. ny fitaovana voamarina ihany no ampiasainay tsy tapaka miaraka amin'ny tsy fitovizan'ny diélectric (Dk) sy ny fatiantoka tangent / dissipation (Df) ary mamoaka ny fitsapana sahaza azy mba hifanaraka amin'ny zavatra takian'ny fampiharana.